South Africa Newspapers and South Africa News sites
Financial Mail Newspaper South Africa
Financial Mail Newspaper South Africa (or the FM, as it is widely known), is a South African business magazine published with a focus of reaching the country’s top business minds. Launched in 1959, the weekly magazine underwent a major “look and feel” change in 2006 which saw it reclaim its position...
The Witness Newspaper South Africa
The Witness Newspaper South Africa is a daily newspaper published in Pietermaritzburg. It mainly serves readers in Pietermaritzburg and the inland areas of KwaZulu-Natal, South Africa. It is the oldest continuously published newspaper in South Africa, having first been published on 27 February 1846. Until 2000, when it became 50 percent...
The Times Newspaper South Africa is a popular South African daily newspaper and an offshoot of The Sunday Times, to whose subscribers it is delivered gratis; non-subscribers pay R3.50 per edition. The Times of South Africa is a daily paper which is delivered free to 137,054 (according to the latest...
Pretoria News Newspaper South Africa
Pretoria News Newspaper South Africa is a daily newspaper based in Pretoria, Gauteng, South Africa.